विद्यार्थी तान्न गेटमै सोधनी बोर्ड « Naya Page
प्रकाशित मिति :2December, 2019 7:33 am
मोरङ, १६ मंसिर । सामुदायिक विद्यालयप्रति अभिभावकको आकर्षण घट्दै जान थालेपछि विद्यालयले सुधारका विभिन्न उपाय अपनाउन थालेका छन् । यही क्रममा बेलबारी–११ मा रहेको लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालयले अभिभावकको ध्यान आकर्षित गर्न प्रवेशद्वारमै सोधनी बोर्ड राखेको छ ।
बोर्डमा लेखिएको छ, ‘अभिभावक ज्यू नमस्कार ! कता हिंड्नु भयो कुन्नि ? विद्यालय प्रवेश गरी छोराछोरीको पढाइबारे छलफल गरौं कि ?’ यो बोर्डले धेरै अभिभावकलाई एकपटक सोच्न बाध्य बनाएको छ ।
नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या दुई हजार नाघ्यो, आज थप २८८ मा संक्रमण
काठमाडौं, २० जेठ । कोभिड –१९को संक्रमण आज एकै दिन २८८ जनामा देखिएको छ ।